iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #686 by Bobpa567
Ndandisanda kuqhuba i-installer yangoku yeFort Wayne Int Airport. Emva koko ndidlulisela i-Scenery / Texture kwifolda yam Yongeza. Kodwa kule ngxaki ndiyabona ukuba iifolda ezimbini zenziwe zikhona (1) fort_wayne_intl_airport_fsx kunye (2) fort_wayne_intl_airport_fsx_part2. Ndingayifumana njani ifolda yeXXXMUMX. Ngaba kufuneka badibaniswe ngokungathi i-part2 inguhlaziyi kwaye ibhala ngaphezulu iifayile zangaphambili.
Naluphi na uncedo oluxabisekileyo!
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #687 by rikoooo
Kutheni ungathanda ukufaka indawo ebonakalayo ngesandla? I-installer-auto iyakwazi ukusingatha umsebenzi kuyo yonke imimimati ehambelanayo.
"Fort_wayne_intl_airport_fsx" ifika kwindawo yokuqala kwaye "fort_wayne_intl_airport_fsx_part2" iza kwindawo yesibini kwilayibhrari ye-FSX.
Ukuba unqwenela ukufakela ngesandla lesi sikhokelo kufuneka ubencede zombini iifolda kwilayibrari yeendawo.
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #689 by Bobpa567
Siyabonga ngolwazi lwakho. Isizathu sokuba ndikhetha ukwenza incwadana yokufaka ifayile. Ndine SDD ezinikeleyo yendawo yam addon kwaye andifuni abafakeli beefayile ukuba bafake iifayile ezibonakalayo kwi-SSD eyine Win 10 kuyo. Andiyena ingcali kodwa ndilandela nje isiluleko esinikwe kwezinye iifom
Ixesha ukwenza page: 0.102 imizuzwana